Self Study Tips, Tricks, Articles, Useful Resources & Information | mmshare
Self Study Tips, Tricks, Articles, Useful Resources & Information
Submitted by everlearner on Sun, 09/01/2013 - 13:08
Learning Drupal is always life time event foraDrupal user. If you areanew comer, it is hard to know Where and How to start. I was in that situation when I started my Drupal journey in mid 2009. Since that time, I'm always finding the ways to help Drupal new comers.
Read more about Drupal Learning Tips and Tricks For Beignners and Beyond
Submitted by everlearner on Thu, 04/28/2011 - 09:23
DrupalCon (Drupal Confrences) are really interesting events for Drupal people around World.
"DrupalCon is an international event that brings together the people who use, develop, design, and support the Drupal platform."
An excerpt from Drupalcon Chicago website
Read more about Collections of Keynotes, Videos and Presentations from DrupalCon Chicago 2011
Sequence, Selections & Iterations in Our Daily Life
Submitted by everlearner on Sat, 04/02/2011 - 12:26
ကျွန်တော်တို့ အခြေခံပညာ အဆင့်မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ သင်္ချာဘာသာရပ်တွေထဲက အချို့ဟာ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ချက်ချင်းကို အသုံးကျပါတယ်။ ဆယ်တန်းမှာ သင်္ချာသင်ရတဲ့ အချိန်က Sequence & Series ကို သင်ရတော့ ပုံသေနည်းတွေ၊ Function တွေထုတ်ပြီး ပုစာၦတွေ အဖြေထုတ်ရတာ အတော်လေး စိတ်၀င်စားစရာ ကောင်းပြီး၊ ပျော်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အဲဒီ သင်္ချာသင်ခန်းစာတွေနဲ့ Computer Software Programming ဆက်စပ်မှုတွေ၊ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀နဲ့ ဆက်စပ်နေတာတွေကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ ဒါမှ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကို ပိုပြီး တန်ဘိုးထား နားလည်နိုင်လိမ့်မယ် ၊ ကိုယ့်အတွက် မဖြစ်နိုင်တော့ရင်တောင် ညီ/ညီမငယ်တွေကို ပြန်ပြီး ေ၀မျှနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်
Read more about Sequence, Selections & Iterations in Our Daily Life
Submitted by everlearner on Sun, 02/27/2011 - 07:07
Research ပြုလုပ်ခြင်းဟာ Engineer, Doctor, Web Developer, Web Designer, Author, Teacher အစရှိတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီး၊ လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုးက ပညာရှင်များအားလုံးအတွက် အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကွမ်းယာရောင်းတဲ့သူလည်း သုတေသနနဲ့ မကင်းပါဘူး။ စိန်ခေါ်မှု အသစ် (New Challenge)၊ တောင်းဆိုမှု အသစ် (New Feature Requests) မရှိတဲ့ လုပ်ငန်း၊ အဲဒီ တောင်းဆိုမှုတွေကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ Challenge တွေကို ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့ Professionals တွေဟာလည်း ရေရှည်မှာ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Read more about How to DoaProper Research for Our Projects, Challenges, Clients, Life and Community
Submitted by everlearner on Thu, 12/23/2010 - 16:59
ကျွန်တော်တို့ ပညာသင်ယူခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း အနုပညာ (The Art of Programming) ဘယ်လောက် အထိ နီးစပ်မှုရှိသလဲ ဒါမှမဟုတ် ေ၀းကွာမှု ရှိသလဲဆိုတာ စဉ်းစားခဲ့ ဖူးပါသလား။ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေနဲ့ ကြီးလာတဲ့အချိန် ကြုံတွေ့ရတဲ့ Programming, Web Development, Graphic Design, Project Management, System Analysis, Engineering, System Administration စတာတွေကြားမှာ ဘယ်လောက် ဆက်စပ်မှု ရှိနေသလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ဖူးပါသလား။ နေ့စဉ် အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ ထမင်းချက်၊ ဟင်းချက်၊ တံမျက်လှည်း စတဲ့ ဗာဟီရ အလုပ်တွေမှာရော ငယ်ငယ်က ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေက ဘယ်လောက် လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေပါသလဲ။
Read more about Programming & Math Basic Relationships
Submitted by everlearner on Thu, 06/10/2010 - 16:27
Hardware, Software, Networking, Web Server စသည့် မည်သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရသည် ဖြစ်စေ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း စတင်သိရှိရသည့် နေရာမှာ - အများအားဖြင့် ၄င်း Hardware, Software, Network ကို အသုံးပြုနေသူများ - ထံမှ ဖြစ်သည်။ (တစ်ခါတရံတွင် သင်၏ Boss ထံမှလည်း လာတတ်သည်။) “ပရင်တာ ထုတ်လို့ မရဘူး” ၊ “အီးမေးလ် ပို့လို့ မရဘူး” ၊ “အင်တာနက် လိုင်းမရဘူး” ၊ “ကွန်ပျူတာ ဖွင့်မရတော့လို့” ၊ “ဒီ Web page က ဒီ Browser မှာတစ်မျိုး ဟို Browser မှာတစ်မျိုး” စသည့် ပြဿနာပေါင်းများစွာကို မရိုးနိုင်အောင် သယ်ဆောင်လာသူများမှာ ထိုပစ္စည်းများ (ထို Software သို့မဟုတ် ထို Web Application) ကို သုံးနေသူများထံမှ ဖြစ်လေသည်။
Read more about Identifying Systems Problems - စနစ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
Submitted by everlearner on Sun, 06/06/2010 - 08:33
Kudos!!3years 1 week ago
Request3years2months ago
Bookmark for drupal3years2months ago
Multiple Search box3years4months ago
Please install at least one Myanamr Unicode4years5months ago
Can't read unicode4years6months ago
Great idea bro!4years7months ago
How To Optimize Our Web Sites With GZIP Compression - Part Three - Gzipping WordPress, Joomla & Drupal Sites
Solving Systems Problems with or without Experiences - ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း စနစ်များ